Mubvunzo wandichiri kubvunzwa nevaridzi vebhizimusi vakura ndewokuti vangaite here kana kuti kwete kubhadhara-per-click (PPC) kushambadzira kana kwete. Haisi yakapusa hongu kana kwete mubvunzo. PPC inopa mukana unoshamisa wekusundira kushambadza pamberi pevateereri pakutsvaga, zvemagariro, uye mawebhusaiti iwe aungasvike kazhinji kuburikidza nenzira dzehupenyu.
Unofanira kuita PPC? Zvakanaka, ndinokurudzira kukurudzira kuva nenheyo raibhurari yezvinyorwa uye Website nemabhero ese uye miridzo usati watanga kushandisa tani yemari kushambadziro. Kusarudzika, chokwadika, ndechekuti kana iwe usina chokwadi kuti ndezvipi zvirimo zvichaburitsa shanduko. Kuedza musanganiswa wezwi rakakosha uye kopi yekushambadzira muPCP inogona kukusererera toni yemari uye nguva yakashandiswa pane zvemukati zvekushambadzira kana usina chokwadi.